Nepal Mamila | कृषकका लागि खुशिको खबर ! बढ्यो अलैंचीको भाउ - Nepal Mamila कृषकका लागि खुशिको खबर ! बढ्यो अलैंचीको भाउ - Nepal Mamila
कृषकका लागि खुशिको खबर ! बढ्यो अलैंचीको भाउ
झापा-विगत केही वर्षदेखि अलैंचीको मूल्यमा आएको गिरावटले किसान र व्यापारीलाई निराश बनाउने गरेको छ । मूल्यमा आउने उतारचढावले किसानले खेती घटाउने र व्यवसायी व्यापारबाटै पलायन हुने गरेका समाचार आउने गरेका छन् ।
व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गएकाले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा ५ अर्ब ९९ करोड ११ लाख ३८ हजार बराबरको ७५ लाख ५० हजार ३ सय ९७ केजी अलैंची निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७९ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको १० महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६२ हजारबराबरको ४१ लाख ६१ हजार ९ सय ३ केजी निर्यात भएको थियो । अलैंची छिमेकी मुलुक भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने गर्छ ।
गण्डकीको बजेट ३० अर्ब ३ करोड
प्रदेश १ सरकारको बजेट ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख